ဟဒီးဆ်: အသင်တို့သည် ကဗရ်သင်္ချိုင်းများ ဘက်သို့ လှည့်၍ ဆွလာသ် မဆောက်တည်ကြနှင့် ၎င်းတို့အပေါ်တွင်လည်း မထိုင်ကြနှင့်။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: အသင်တို့သည် ကဗရ်သင်္ချိုင်းများ ဘက်သို့ လှည့်၍ ဆွလာသ် မဆောက်တည်ကြနှင့် ၎င်းတို့အပေါ်တွင်လည်း မထိုင်ကြနှင့်။
မရ်ဆဒ် အလ်ဂနဝီ (ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ တမန်တော်မြတ် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်) မိန့်တော်မူသည်။ အသင်တို့သည် ကဗရ်သင်္ချိုင်းများ ဘက်သို့ လှည့်၍ ဆွလာသ် မဆောက်တည်ကြနှင့် ၎င်းတို့အပေါ်တွင်လည်း မထိုင်ကြနှင့်။
ကဗရ်သင်္ချိုင်းဘက်သို့ လှည့်၍ ဆွလာသ် ဆောက်တည်ခြင်းဖြင့် ကဗရ်သည် ဆွလာသ်ဆောက်တည်သူ၏ ရှေ့တွင်ရှိနေသောကြောင့် ထို့သို့ဆောက်တည်ခြင်းအား တမန်တော်မြတ် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က တားမြစ်တော်မူခဲ့သည်။ ထို့အတူ ကဗရ်သင်္ချိုင်းပေါ်တွင် ထိုင်ခြင်းကိုလည်း တားမြစ်တော်မူခဲ့သည်။ ဤတားမြစ်ချက်တွင် ကဗရ်အား သေးသိမ်စေသည့် လုပ်ရပ်များ ဖြစ်သည့် ကဗရ်ပေါ်သို့ ခြေထောက်တင်ခြင်း၊ ကဗရ်ပေါ်တွင် အပေါ့၊အလေး စွန့်ခြင်းစသည်တို့ပါဝင်ပြီး ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်များအားလုံးကို တားမြစ်ထားသည်။
ကဗရ်သည် ဆွလာသ်ဆောက်တည်သူ၏ ရှေ့တွင်ရှိနေသောကြောင့် ကဗရ်သင်္ချိုင်းဘက်သို့ လှည့်၍ ဆွလာသ် ဆောက်တည်ခြင်းကို တားမြစ်ထားသည်။ တားမြစ်ချက်သည် တားမြစ်ထားသည့်အရာကို တရားမဝင်ကြောင်း ညွှန်ပြနေသည်။
(ရှိရ်က်) ဖက်စပ်ယှဉ်တွဲကိုးကွယ်မှုသို့ ရောက်ရှိစေမည့် တံခါးပေါက်များအားလုံးကို ပိတ်ပင်ထားသည်။
ကဗရ်သင်္ချိုင်းများပေါ်တွင် ထိုင်ခြင်းသည် ကဗရ်ထဲရှိသူကို သေးသိမ်အောင်ပြုလုပ်သည့် လုပ်ရပ်တစ်မျိုးပင် ဖြစ်သည့်အတွက် တားမြစ်ထားသည်။
တားမြစ်ချက်၌ ကဗရ်သင်္ချိုင်းများကို အတိုင်းထက်အလွန် ဂုဏ်ပေးခြင်းနှင့် သေးသိမ်အောင်ပြုခြင်း နှစ်မျိုးစလုံးပါဝင်သည်။သို့ဖြစ်၍ ကဗရ်ဘက်သို့ လှည့်၍ ဆွလာသ် ဆောက်တည်ခြင်းသည် ကဗရ်ကို အတိုင်းထက်အလွန် ဂုဏ်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့အပေါ် ထိုင်ခြင်းသည် ကဗရ်ကို သေးသိမ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အစ္စလာမ်သာသနာတော်က ကဗရ်များကို အတိုင်းထက်အလွန် ဂုဏ်ပေးခြင်းနှင့် သေးသိမ်အောင်ပြုခြင်း နှစ်မျိုးစလုံးကို တားမြစ်ထားသည်။ အတိုင်းထက်အလွန်ဖြစ်ခြင်းနှင့် လျစ်လျှူပြု အလေးမထားခြင်းတို့ မရှိစေရ။
မွတ်စ်လင်မ်တစ်ဦး၏ ဂုဏ်သိက္ခာသည် ၎င်းသူ ကွယ်လွန်ပြီးနောက်တွင်လည်း ကျန်ရှိနေသည်။ ဤသည်ကို ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)၏ ဩဝါဒတော်က ထောက်ခံထားသည်မှာ-(သေသူတစ်ဦး၏ အရိုးကိုချိုးခြင်းသည် ရှင်နေသူတစ်ဦး၏ အရိုးကိုချိုးသကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။) ထိုအချက်ကြောင့်ပင် သေဆုံးသူများ၏ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကို ဖြတ်တောက်ပြီး သေသူများကို သေးသိမ်အောင်ပြုကြသူများသည် ဒုစရိုက်မှုကို ကျူးလွန်ကြသူများပင်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤသည် သေသူကို စော်ကားခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင် သေသူကို ဒုက္ခပေးခြင်းပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့် “ဖုကဟာအ်” ဓမ္မသတ်ပညာရှင်များက သေသူကိုယ်တိုင် ကိုယ်ခန္ဓာလှူဒါန်းကြောင်း မှာတမ်းခဲ့လျှင်လည်း သေသူ၏ ကိုယ်လက်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကို ဖြတ်တောက်ခြင်း “ဟရာမ်” မပြုပိုင်ကြောင်း ဓမ္မသတ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုသူတွင် မိမိနှင့်ပတ်သက်၍ ဤသို့ပြုလုပ်ခွင့်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိသည့်အတွက်ဖြစ်သည်။
ကဗရ်သင်္ချိုင်းကို မှီခြင်းသည် ၎င်းအပေါ်ထိုင်ခြင်း မဟုတ်သည့်အတွက် ပြုပိုင်သည်။ သို့သော် ဤသို့ မှီခြင်းကို သေးသိမ်စေသည့်လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်ဟု လူတို့က ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ သတ်မှတ်ထားလျှင် ထိုသို့မှီခြင်းမျိုး မပြုသင့်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပုံသဏ္ဍာန်ကိုအဓိကကြည့်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းပုံသဏ္ဍာန်သည် လူတို့ထံ၏ ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ သေးသိမ်အောင်ပြုသည်ဟု ယူဆထားပါက ထိုလုပ်ရပ်သည် “မုဗာဟ်” လုပ်ခွင့်ရှိနေလျှင်လည်း ရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည် ပို၍ကောင်းမြတ်လှပေသည်။
ဖိကဟ်နှင့် ၎င်း၏စည်းမျဥ်းများ။ . ခဝပ်ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ ဖိကဟ်။ . ဆွလာသ်။ . ဆွလာသ်၏ ရှူရူးသ် စည်းကမ်းချက်များ။ .